Urume Loss yokuvirisa
Spacers uye Flushes
Drilling Zara chirungiso
Anti-sloughing uye ichivharira plugging mumiririri
Oiri-garo kuchera mvura mvura chirungiso
Oiri-garo kuchera mvura mvura michina
Product News & Zviziviso
Oilbayer ndiye Integrated yepamusorosoro zvebhizimisi kushandisa pakutsvakurudza kuvandudza, kugadzira, uye kutengesa ari oilfield zvemakemikari mabasa pamusika. Rine mbiri kugadzira miti riri Lingang Chemical Industry Zone muna Cangzhou, Hebei dunhu uye Tianjin Binhai High hwemberi mukugadzira Zone riripi 12km kubva Tianjin International Airport uye 22km kubva Tianjin Port.
Oilbayer ndiye aitungamirira oilfield zvemakemikari mabasa Provider pamwe wenyika pamusoro-notch mumarabhoritari, nyanzvi tsvakurudzo chikwata uye zvemberi zvikukutu uye mvura zvoga dzaFord mu China. Tinogona kupa yakavimbika hwokugadzira mhinduro uye zvakakukodzera zvigadzirwa kuti vatengi. Tinoedza kupa yakatsiga kuita uye yakavimbika unhu zvigadzirwa kuti customers.At redu, tine yakazvimirira rezvedzidzo kodzero, akadai cementing Urume kurasikirwa yokuvirisa, retarders, dispersants; yakavakirwa mafuta-Drilling zvinwiwa, FIs, Anti-sloughing uye ichivharira plugging mumiriri, kupera Urume nezvimwewo, mhando zvinopfuura 30 mishonga iri pamusoro apa 7 dzakatevedzana.
Uyezve, tinoramba tine kwenguva refu pamwe chete oilfield kambani kubva Iran, Saudi Arabia, Mexico, Indonesia, Venezuela, Canada, Australia, Siria etc. Zvinokosha paakataura kuti isu ndazviwanira refu kwazvo mwero nokukoshesa kwavari kusanganisira NIDC , PDVSA, ONGC, BELORUSNEFT, PERTAMINA uye PEMEX etc.
Tichirangarira Oilbayer Mashoko, "Itai Dzinondishamisa Zvichiitika", zvakaratidzwa wedu kuva mutungamiri pakati oilfield emakemikari basa munyika, tinovaisa pachedu kupa wakachengeteka, kwezvakatipoteredza ushamwari, chokutanga-Kirasi, mukuru-kushanda zvakanaka uye vaikoshesa mabasa epamba yedu uye dzakawanda vatengi. Oilbayer unrelentingly anoedza kupa takunda zvisamumirira rako kuti vatengi vedu uye vamwe.